विभेदविरुद्ध उभिएकी एउटी युवती | Ratopati
विभेदविरुद्ध उभिएकी एउटी युवती
personमनिकर कार्की निवर्तमान exploreकाठमाडौं access_timeबैशाख ३१, २०७६ chat_bubble_outline0
एक्कासि मोबाइलमा घन्टी बज्यो । फोनमा उही परिचित आवाजले निम्तो दियो– ‘मनिकरजी हामी अहिले नेपाल–भारत सीमाको पूर्वी नाकाको मेची पुलमा आइपुगेका छौँ । भोलि हाम्रो पदयात्रा समापन कार्यक्रम हुँदैछ, तपाईं जसरी पनि आउनुपर्यो ।’ टेलिफोनको परिचित आवाज थियो सामाजिक अभियन्ता रीता परियारको । रीतासहित होमराज आचार्य र अशोक दर्नालको टोलीले करिब दुई महिनादेखि जारी रहेको महाकालीदेखि मेचीसम्मको पदयात्रा सम्पन्न गर्दैथियो । यो आफैँमा एउटा महत्त्वपूर्ण परिघटना हो । दुःख, कष्ट र पीडालाई छिचोल्दै दुई महिनासम्मको एक हजार २४ किलोमिटरको पदयात्रा आफैँमा दुस्साहसपूर्ण कदम हो । यो कठिन र पीडादायी यात्रा सम्पन्न गरेकोमा सबै पदयात्रीहरुलाई बधाई ।
अनौपचारिक शैलीमा आफ्ना अनुभूति सुनाउँदै भनिन्– मलाई लाग्थ्यो, आजको २१औँ शताब्दीमा छुवाछूत र जातीय विभेद हुने कुरै रहँदैन । यो केवल राजनीतिक उद्देश्य पूर्तिका लागि उठाइने मुद्दा मात्र हो । म आफैँ लामो समय युरोप बसेँ । जीवनमा उत्पीडनको खासै अनुभूति पनि गरिनँ । मलाई लाग्थ्यो– विभेद भन्ने कुरा कहाँ छ ? हामी सबै सँगै त छौँ । सबै समानै त छौँ तर यो पदयात्रामा उत्रिएपछि थाहा पाएँ दृश्य त अर्कै रहेछ । फिल्डमा उत्रिएपछि मेरा सबै भ्रमहरु चिरिएका छन् । मान्छे मान्छेबीचको विभेद र छुवाछूतको जरो त यति बलियो रहेछ कि त्यो सीतिमिति काटिने देखिएन ।
विश्व कहाँ पुगिसक्यो हामीभने अझै त्यही छुवाछूतकै मुद्दामा अल्झिरहेका छौँ । आखिर किन ? किन हामीलाई यसले पोल्दैन ? के अझै पनि हाम्रा होनाहार युवा पुस्ताले छुवाछूतको अन्त्यका लागि भन्दै कष्टसाध्य पदयात्रा गरिरहनुपर्ने हो ? आखिर यो कहिलेसम्म ? हामीले मानवीयता किन गुमाइरहेका छौँ ? यो कस्तो संस्कार र संस्कृति हो, जसले मानवलाई जनावरभन्दा तल्लो श्रेणीमा राखिरहेको छ ?
छुवाछूत वास्तवमा मानवता विरोधी कुरा हो । त्यसैले यसको अन्त्यका लागि सामाजिक अन्तरघुलनसँगै उत्पीडकहरुबाटै अन्तरघुलनको अभियान सुरु हुनुपर्छ । अन्य समुदायबाटै यसको उठान हुनुपर्छ । साथै शास्त्रीय रूपमा पनि यसको सुरुवात कसरी भयो ? र किन गरियो ? त्यसको कारण खोजेर समाधान गर्नुपर्छ । विभेद र छुवाछूतसँग राज्यको व्यवहार र उदासीपन पनि जोडिएर आउँछ । यसको पछाडि सत्ताले गरेको विभेद नै मुख्य हो । वैधानिक सत्ताले निर्माण गरेका धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक सत्ताले विभेदलाई संस्थागत गरिरहेको छ । यसर्थ, यसको समाधानका लागि सत्ताकै पुनर्संरचना अपरिहार्य देखिन्छ ।
(तस्बिरहरु रीता परियारको फेसबुकबाट)